News - Waxyaabaha la isku daro
Baraf macmal ah lagama heli karo dharka dharka xagaaga, oo ka samaysan maadada fiber-kiimikada, waa giraangirta alaabta ceeriin. Chiffon maro duuduub-u adkaysi u leh dharka, iyo jirka sare wuxuu leeyahay xarrago, suunka dabiiciga ah, qabow iyo dareen nasasho leh, sida loo xirto sida wanaagsan ee muuqata.
Laakiin dharka chiffon ee habka wax soo saarka ayaa sidoo kale loo qaybiyaa tayo sare iyo liidata, xulashada ku tiirsanaanta gacanta si aad u taabato, si aad indhahaaga u aragto, ha u dooran xumaan si aad lacag u keydiso, waa inay soo iibsato tayo. Maro jilicsan oo jilicsan oo jirka ku labisan ayaa dareemi doona dhidid cufan oo maqaarka qabsada, dhar cufan oo aad u badan, oo tayo sare leh oo chiffon ah ma yeelan doonaan dhibaato noocaas ah.
2. Fibre la cusboonaysiin karo
Fibre-ka dib loo soo cusbooneysiiyay waxaa lagu dhiirrigeliyaa wareejinta silkworm, iyadoo loo adeegsanayo walxo dabiici ah alaab ceeriin ah, kiimikada lagu farsameynayo xalka uruurinta, ka dibna la miiqinayo farsamaynta si loo sameeyo fiber-ka dharka. Iyada oo leh nuugista qoyaan aad u fiican iyo soo-saarista hawada, waxaa la oran karaa waa fiber kiimikada ugu habboon xagaaga mana aha mid dheg dheg leh.
3. Faybar dabiici ah
Faytarka 'synthetic fiber' waa faybar kiimiko saafi ah, oo sidoo kale loo yaqaan 'polyester', oo ah dharka ugu badan ee dharka xagaaga. Dadka qaba xasaasiyadda maqaarka waxay dareemi karaan in xirashada walaxdaan ay u sababi doonto raaxo daro maqaarka. Xaqiiqdii, inta badan fiilooyinka polyester-ka hadda jira waa kuwo shaqeynaya oo xitaa ka raaxo badan cudbiga. Dharka qaar ee Uniqlo sidoo kale waxay adeegsadaan fiilooyinka polyester-ka, sidaa darteed looma baahna in laga walwalo xasaasiyadda. \_
Markaad iibsaneyso dharka xagaaga, ka sokow tixgelinta qaabka, waxaa muhiim ah in la ogaado sida loo doorto maaddada, taas oo wanaagsan oo raaxo leh in la xidho. Ka dib markaan aqriyay qodobkan, waxaan aaminsanahay inay qasab tahay inaad hooseyso wadnaha markaad dooranaysid dharka, ma dooran doontid qalad.
Waqtiga dhejinta: Jul-18-2020